Faahfaahin dabkii khasaaraha dhaliyey ee xerada qaxootiga ee Garoowe (Sawiro) – SBC
Faahfaahin dabkii khasaaraha dhaliyey ee xerada qaxootiga ee Garoowe (Sawiro)
Xerada kaam shabeelle ee ku taalada duleedaka waqooyi ee magaalda Garoowe ayaa saaka barqanimadii waxaa ka kacay dab aad u xoogan oo sababay khasaare dhanka guryaha ay dadkaasi isticmaalayeen ah iyadoon ay jiraan dhaawacyar oo soo gaaray dhowr qof oo ka mid dadkii daganaa kaamkaasi .
Xeradaani ayaa waxa daganaa qoysas barakacayaal ah, waxaana dabkaani sida la sheegay u ka bilowday mid kamid ah aqalada ay daganayeen dad ka soo barakacay uu si fudud dabka uu cirka isku shareeray holac iyo qiica dabka ayaa waxaa laga arkayay guud ahaan magaalada Garoowe inkastoo ay u soo Gurmadadeen Dadwaynaha ka agdhawaa iyo Booyado Biyood si gaara loo lahaa Halka markii danbe ay timid Booyad dabdamis ah oo xoojisay Daminta dabkaan oo sacado qatay .
Goobta uu dabka kasocoday ayaa waxaa si aad ah loo adkeeyay amaankeeda waxaana Markiiba soo garay Masuuliyiin ka socday Booliska, Dowlada hoose iyo Ha’yado ay ka mid aheen UNHCR oo qaxootiyada u qaabilsan Qaramda midoway iyo sidoo kale Ha’yada UNOCHA.
Gudoomiyaha Kaam SHabeele Maxamed C/qani xaaji nuur Waxaa uu ka waramaya sida ay wax u dhaceen iyo khasaraha Guryaha soo garay iyo Hantida kale oo gubatay oo ay maanta qoraxda dushooda ay ku dhacayso waxuuna hay’adaha ka codsaday in dadkaasi ay maanta gur yahooda gubteen in loo soo gurmado.
C/rashiid Ciise Hoyaale oo ah Madaxa arrimaha Bulshada ee Dowlada hoose ee degmada Garoowe ayaa waxa uu ugu baaqay Shacabka in ay gacan siiyaan Dadka Dhibtu soo Gaartay maanta lacaawiyo oo kaalmo bini aadnimo lala soo gaarro isagoona dhankooda sheegay inay isku dayayaan inay wax ka qabtaan.
Maxamed Salax oo ah sargaal ka tirsan Ha’yada UNHCR ayaa waxaa uu ka waramay Dhibta dadka soo gaartay, waxana ku daray in arinkaani laga yelan doono shir degdega Si dadka Gurmado loogu fidiyo waxuuna in taasi ku daray inay qiimayn ku samaydoonaan Qasaaraha kadhashay dabka maanta qabsaday xerada kaam shabeelle ee duleedka waqoyi ee Magaalada Garoowe.
Sikastaba ha ahaatee dabka maanta qabsaday xerada kaamshabeelle oo ay ku guryo beeleen boqolaalqoysas oo ku noolaa halkaasi ayaa waxaa dhibaatada lasooo daristay dadkaasi ay ku soo beegmaysaa xili dadkaasi Hay satay xaalado bi’aadnimo oo aad daran laguna jiro xilli xagaayeed oo ay dhacayso dabayl aad uxoogbadan.
C/casiis Axmed Ibraahim (OK)
Julaay 11, 2011 at 6:27 pm
allaha dadkaas u gargaaro